အိမ်ငှားတော့မယ်ဆိုရင်…… – ADS Myanmar Blog
နှစ်သစ်မှာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး အိမ်ငှားတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူ အဆောင်သူလေးတွေ စုပြီးပဲငှားငှား၊ မိသားစုနဲ့ပဲနေနေ၊ အိမ်ခန်းတစ်ခန်းငှားတော့မယ်ဆိုရင် သိရှိထားရမယ့် အချက်ကလေးတွေကို ads.com.mm ကနေ ပြောပြပေးပါမယ်…….
(၁) သုံးမယ့်ငွေ ပမာဏကို သတ်မှတ်ပါ…..
ကိုယ့်ဝင်ငွေရဲ့ လစဉ် ၃၀% ကိုအိမ်ငှားဖို့အတွက် ပုံမှန်စုဆောင်းထားပါ။ ကိုယ်စုထားတဲ့ ငွေပမာဏ နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အိမ်မျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။ အိမ်ခန်းကျယ်လို့ ပိုက်ဆံပိုပေးရယ်ဆိုရင် ကိုယ်အတွက် တန်မတန်၊ နေရာ အကျယ်လိုမလို ပြန်လည်တွက်ချက်ပါ။
အိမ်ငှားတော့မယ်ဆိုရင် Free Classified website တွေ၊ ဂျာနယ်တွေက အခမဲ့ကြော်ငြာကဏ္ဍတွေ မှာရှာကြည့်ပါ။ အိမ်ရှင်အိမ်ငှား တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အပိုဝန်ဆောင်ခ ပေးရတာ သက်သာ စေပါတယ်။ အိမ်ရဲ့ တည်နေရာ ၊ သွားရေးလာရေး ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ကျောင်း ၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်း စတဲ့ အရာတွေဟာလည်း အိမ်ငှား တော့မယ်ဆိုရင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ငှားနေမယ့် အိမ်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုလည်း သေချာ လေ့လာရပါမယ်။
ကိုယ်ငှားနေမယ့်အိမ်ရဲ့ အိမ်ရှင်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အလုပ်အကိုင်တွေကိုသေချာမှတ်ထားရပါမယ်။ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် ၊ ရုံးလိပ်စာ စတာတွေကိုလည်း အိမ်ရှင်ကို ယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိစေဖို့ ပေးထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်ရှင်နဲ့ မြေရှင်ဟာ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် မြေရှင်ရဲ့ ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် သိထားသင့်ပါတယ်။
(၄) အိပ်ငှားရာမှာ ပါဝင်မယ့်အရာတွေကို ရှင်းလင်းအောင်လုပ်ထားပါ
ရေ၊ မီး ၊ လေအေးပေးစက် ၊ အပူပေးစက်၊ TV Channel ၊ Internet Connection စတဲ့ အရာတွေကို ပါမပါ စစ်ပြီး စာချုပ်ချုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ယင်းအချက်တွေကိုပါ ထည့်ရေးပါ။ အိပ်ငှားခအပြင် အပိုဝန်ဆောင်မှု ပေးချေတဲ့နေရာမှာ တိတိကျကျ ကွဲကွဲပြားပြားသိသာစေပါတယ်။
အိမ်ငှားခ၊ တည်နေရာ စတဲ့နေရာတွေ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ကိုယ့်ငှားနေမယ့်အခန်း၊ အိမ်ကို တစ်ခါ လောက်တော့သွားရောက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီးကြိုးတွေ၊ ဝါယာကြိုးတွေ ပေါက်နေတာ၊ ပျက်ဆီးနေတာရှိမရှိ
ပြတင်းပေါက် ၊တံခါး၊နံရံတွေ ကောင်းမကောင်း၊ လုံခြုံမှုရှိမရှိ
ပြင်ပဆူညံသံ (ကျောင်းသားလူငယ်တွေပါနေမယ်ဆိုရင် ပြင်ပဆူညံသံများတဲ့နေရာဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာလဲ အဓိကထားစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်)
(၆) စာချုပ်မချုပ်ခင် သေချာဖတ်ပါ
အိမ်ငှားနေတဲ့ အတောအတွင်း ကိုယ့်ဘက်က တာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေ ( ဥပမာ- အိမ်မှာ တခုခု ချို့ယွင်းလို့ကုန်ကျမယ့်ပြင်ဆင်စရိတ်ကိုတာဝန်ယူရန်လိုမလို)
ညအိပ် ဧည့်သည်လက်ခံခွင့်ပြုမပြု စတဲ့ အချက်တွေကို သေချာစစ်ဆေးဖတ်ရှု့ရပါမယ်။
ကိုယ့်စိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိ အားလုံးစစ်ဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင် အိမ်ရှင်နဲ့အတူ တာဝန်ခွဲဝေယူရမယ့်အပိုင်းတွေ၊ နောက်ပိုင်းစာချုပ်ချုပ်ဆက်ချုပ်ရင် ဈေးအပြောင်းအလဲ ရှိမရှိ၊ စတာတွေကိုသေချာရှင်းလင်းအောင်လုပ်ပြီး ငှားရမ်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှစသြစမြှာ ဇနီးမောငနြှံနှစြဦး အိမငြှားတာဘဲဖှစဖြှစြ ၊ ကွောငြးသားကွောငြးသူ အဆောငသြူလေးတှေ စုပှီးပဲငှားငှား၊ မိသားစုနဲ့ပဲနနေေ၊ အိမခြနြးတစခြနြးငှားတော့မယဆြိုရငြ သိရှိထားရမယြ့ အခကွကြလေးတှကေို ads.com.mm ကနေ ပှောပှပေးပါမယြ…….
(၁) သုံးမယြ့ငှေ ပမာဏကို သတမြှတပြါ…..
ကိုယြ့ဝငငြှရေဲ့ လစဉြ ၃၀% ကိုအိမငြှားဖို့အတှကြ ပုံမှနစြုဆောငြးထားပါ။ ကိုယစြုထားတဲ့ ငှပမောဏ နဲ့ ကိုကညြီမယြ့ အိမမြွိုးကိုရှေးခယွပြါ။ အိမခြနြးကယွလြို့ ပိုကဆြံပိုပေးရယဆြိုရငြ ကိုယအြတှကြ တနမြတနြ၊ နရော အကယွလြိုမလို ပှနလြညတြှကခြကွပြါ။
အိမငြှားတော့မယဆြိုရငြ Free Classified website တှေ၊ ဂွာနယတြှကေ အခမဲ့ကှောငြှာကဏျဍတှေ မှာရှာကှညြ့ပါ။ အိမရြှငအြိမငြှား တိုကရြိုကခြွိတဆြကတြဲ့နရောတှေ ဖှစတြဲ့အတှကြ အပိုဝနဆြောငခြ ပေးရတာ သကသြာ စပေါတယြ။ အိမရြဲ့ တညနြရော ၊ သှားရေးလာရေး ၊ စွေးဆိုငြ ၊ ကွောငြး ၊ ဆေးရုံ ဆေးခနြး စတဲ့ အရာတှဟောလညြး အိမငြှား တော့မယဆြိုရငထြညြ့သှငြးစဉြးစားရမယြ့အရာတှဖှစေပြါတယြ။ ကိုယငြှားနမယြေ့ အိမပြတဝြနြးကငြွ ကိုလညြး သခွော လလေ့ာရပါမယြ။
ကိုယငြှားနမယြေ့အိမရြဲ့ အိမရြှငလြိပစြာ၊ ဖုနြးနံပါတြ၊ အလုပအြကိုငတြှကေိုသခွောမှတထြားရပါမယြ။ ဒါ့အပှငကြိုယြ့ရဲ့ဖုနြးနံပါတြ ၊ ရုံးလိပစြာ စတာတှကေိုလညြး အိမရြှငကြို ယုံကှညမြှုတစခြုရှိစဖေို့ ပေးထားသငြ့ပါတယြ။ နောကပြှီး အိမရြှငနြဲ့ မှရှငေဟြာ တစယြောကထြဲ မဟုတခြဲ့ဘူးဆိုရငြ မှရှငေရြဲ့ ဖုနြးပဲဖှစဖြှစြ သိထားသငြ့ပါတယြ။
(၄) အိပငြှားရာမှာ ပါဝငမြယြ့အရာတှကေို ရှငြးလငြးအောငလြုပထြားပါ
ရေ၊ မီး ၊ လအေေးပေးစကြ ၊ အပူပေးစကြ၊ TV Channel ၊ Internet Connection စတဲ့ အရာတှကေို ပါမပါ စစပြှီး စာခွုပခြွုပတြော့မယဆြိုရငြ ယငြးအခကွတြှကေိုပါ ထညြ့ရေးပါ။ အိပငြှားခအပှငြ အပိုဝနဆြောငမြှု ပေးခွတေဲ့နရောမှာ တိတိကကွ ကှဲကှဲပှားပှားသိသာစပေါတယြ။
အိမငြှားခ၊ တညနြရော စတဲ့နရောတှေ စိတကြှိုကဖြှစပြှီဆိုရငြ ကိုယြ့ငှားနမယြေ့အခနြး၊ အိမကြို တစခြါ လောကတြော့သှားရောကစြစဆြေးသငြ့ပါတယြ။
လွှပစြစမြီးကှိုးတှေ၊ ဝါယာကှိုးတှေ ပေါကနြတော၊ ပကွဆြီးနတောရှိမရှိ
ပှတငြးပေါကြ ၊တံခါး၊နံရံတှေ ကောငြးမကောငြး၊ လုံခှုံမှုရှိမရှိ
ပှငပြဆူညံသံ (ကွောငြးသားလူငယတြှပေါနမယေဆြိုရငြ ပှငပြဆူညံသံမွားတဲ့နရောဟုတမြဟုတြ ဆိုတာလဲ အဓိကထားစစဆြေးသငြ့ပါတယြ)
(၆) စာခွုပမြခွုပခြငြ သခွောဖတပြါ
အိမငြှားနတေဲ့ အတောအတှငြး ကိုယြ့ဘကကြ တာဝနယြူရမယြ့အပိုငြးတှေ ( ဥပမာ- အိမမြှာ တခုခု ခွို့ယှငြးလို့ကုနကြမွယြ့ပှငဆြငစြရိတကြိုတာဝနယြူရနလြိုမလို)
ညအိပြ ဧညြ့သညလြကခြံခှငြ့ပှုမပှု စတဲ့ အခကွတြှကေို သခွောစစဆြေးဖတရြှု့ရပါမယြ။
ကိုယြ့စိတကြွနပေတြဲ့အထိ အားလုံးစစဆြေးပှီးသှားပှီဆိုရငြ အိမရြှငနြဲ့အတူ တာဝနခြှဲဝယေူရမယြ့အပိုငြးတှေ၊ နောကပြိုငြးစာခွုပခြွုပဆြကခြွုပရြငြ စွေးအပှောငြးအလဲ ရှိမရှိ၊ စတာတှကေိုသခွောရှငြးလငြးအောငလြုပပြှီး ငှားရမြးရမှာပဲဖှစပြါတယြ။
Author hsulattPosted on January 29, 2016 Categories Lifestyle, OtherTags အိမ်ငှားတော့မယ်ဆိုရင်……
Previous Previous post: တစ်လအတွင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ……
Next Next post: အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့ တနင်္လာ ……